နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွှတ်ပေးရေးနဲ့ သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရေး လွှတ်တော်မှာ NDF တင်ပြ
နေပြည်တော်မှာ ဆက်လက် ကျင်းပနေတဲ့ လွှတ်တော်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေက နိုင်ငံရေးနဲ့ လူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဆို တင်သွင်းတာတွေနဲ့ မူကြမ်း တင်ပြတာတွေရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပါတီ ရုံးခွဲဖွင့်ပွဲတွင် အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့က ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပုံ ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီိမိုကရေစီ အင်အားစုပါတီ NDF က မေးခွန်းများ မေးဘို့ တင်ပြထားသလို အဆိုပြုချက်နဲ့ ဥပဒေပြုရေး ကိစ္စတွေလည်း တင်သွင်းထားရာမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့်ပေးရေးဟာ အဓိက ဖြစ်တယ်လို့ ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
ဦးခင်မောင်ဆွေကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
အစိုးရသစ်နဲ့ လွှတ်တော်ကို စောင့် ကြည့်ဝေဖန်ဖို့ အဖွဲ့သစ်ထူထောင်
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တာဝန်ရုပ်သိမ်းခြင်း ဥပဒေကြမ်း
အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်ဘဲလက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်
ရန်ကုန်အစိုးရ ချေးငွေအစီအစဉ် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကန့်ကွက်
ရှမ်းပြည်နယ်က လောင်းကစားဝိုင်းတွေ ပပျောက်ရေး
pyaw pyaw nar nar p pyaw. pyaw pyaw,pyaw lae maw mal.... like giving the palatar to the cow. stand behind the leader who is admired by the people. try to organize the people to fight for.whatever changes are able to be moved forward by the people.
Feb 11, 2011 01:53 PM